Rag Soomaali-Swedish iyo mid kale oo qirtay inay ka tirsan yihiin Alshabaab – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Rag Soomaali-Swedish iyo mid kale oo qirtay inay ka tirsan yihiin Alshabaab
Saddex nin oo Somali ah, balse labo ka mid haystaan dhalashadda dalka Sweden ayaa shalay ka hor qirtay Maxkamadda magaalladda New York ee dalka Maraykanka inay taageeri jireen Alshabaab.
Eedeysanayaashaasi oo in ka badan labo sanno ka hor ay Dembi-baarista Federalka Maraykanka (FBI) ka soo qabteen dalka Jabuuti ayaa lagu kala magacaabaa Mahdi Hashi iyo Mohamed Yusuf oo haysta dhalashadda Swedish iyo Ali Yasin Ahmed.
Dacwad-oogayaasha Maxkamadda Brookleyn ee magaalladda New York ayaa sheegay inay Eedeysanayaashaasi xubno ka ahaayeen Alshabaab muddadii u dhexeysay December ee sannadkii 2008-kii ilaa August 2012-kii.
Eedeysanayaasha Mahdi Hashi, Ali Yasin Ahmed oo haysta dhalashadda Swedish ayaa la sheegay inay xiriir dhow la lahaayeen Jihaadistihii Maraykanka ee Omar Hammaami oo loo yaqiinay Abu Mansuur Alamriiki, kaasi oo lagu dilay dagaal u dhexeeyey Alshabaab sannadkii 2013-kii.
Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay inay Eedeysanayaasha lagu qabtay dalka Jabuuti bishii August ee sannadkii 2012-kii, iyagoo ku sii jeeday dalka Yemen.
Waxaana loo gacan-geliyey Hay’adda FBI-da bishii November ee isla sannadkaasi, kadibna waxaa loo soo duuliyey magaalladda New York, si loogu maxkamadeeyo.
Dacwad-oogayaasha Maraykanka, ayaa sheegay in Eedeysane Mohamed Yusuf ka soo muuqday Muuqaal Video ah oo ay Alshabaab baahiyeen, isagoo ku hadlaya Luqadda Swedishka, kuna baaqayey in laga qeyb qaato dagaalladda ay Alshabaab kula jirto Ciiddanka Dowladda Federalka iyo kuwa AMISOM.
Dacwad-oogayaasha waxay kaloo sheegeen inuu Eedeysanahaasi cabsi geliyey Farshaxniste horey u sawiray sawirro lagu aflagaadeeyey Nebigeenna Muxumad CSW.
Dhinaca kale, Eedeysanayaashaasi ayaa qirtay eedeymaha lagu soo oogay, waxayna muteysan doonaan xabsi min 15-sanno ah waxaana loo masaafurin doonaa dalka Sweden marka ay Xabsigooda ku dhamaystaan Xabsiyadda Maraykanka.
Xukuumadda Maraykanka oo doonaysa in xabsi daa’in lagu xukmumo Buracd-baddeed Soomaali ah